Publié novembre 20, 2019 par Book News
Vao tsy ela akory no nisehoana tranga fahaverezana zaza iray izay nitana ny sain’ny maro teto Antananarivo. Momba izay indrindra dia maro ireo tranga voarain’ny Polisim-pirenena tamin’ity taona 2019 ity.
Tranga fahaverezana zaza
Tamin’ity 2019 ity dia nahatratra 956 ny isan’ny fanambarana zaza tsy hita vorain’ny Polisy misahana zaza tsy ampy taona sy heloka mamoafady eny Tsaralalana.
Voafaritra fa 637 fitsoana antoka trano ary 319 ny tsy fahitana zaza. 779 ny zaza tafaverina an-tokatranony. Roa kosa no nindaosin’ny fahafatesana.
Araka ny vaovao azo, ny tranga mateti-piseho dia ny fahatahorana ny ray aman-dreny noho ny olana eo amin ray aman-dreny. Ny andrakandrana ataon’ny ankizy lahy sy vavy ihany koa dia anisan’ny antony mahatonga ny tsy fahatina na fitsoan’ny zaza.
Marihina fa tsy misy « kidnapping » ireo raharaha ireo araka ny tatitra avy amin’ny Polisim-pirenena.
Nisy ny famoriana mpanao gazety nataon’ny Polisim-pirenena, omaly, mahakasika ny tranga fahaverezana zaza. cc: Toria Dimbiniaina
Fakana zaza an-keriny: hita tany Antanifotsy i Taniah
Tra-tehaky ny Polisy afak’omaly tany Antanifotsy ilay vehivavy nanafina an’i Taniah,ilay zazavavikely 10 taona izay very tamin’ny herinandro lasa teo, ka niteraka resabe tao amin’ny tambazotra sosialy.
Araka ny loharanom-baovao hita tao amin’ny tambazotra sosialy dia nisy naka an-keriny i Taniah.
Araka ny tatitra avy amin’ny Polisim-pirenena dia olana eo anivon’ny ankohonana no nahatonga ity taranga ity. Raha ny tantara dia efa nisaraka ny ray aman-drenin’i Taniah. Niaraka tamin’ny vehivavy hafa ny rainy taty aoriana.
Ilay filazana niparitaka tao amin’ny tambazotra sosialy momba ny fahavereezan’i Tania. cc: Facebook
Nisy anefa ny disadisa teo amin’ny ray niteraka azy sy ny olon-tian’ilay rainy. Nalain’ilay olon-tian’ny rainy tany ampianarana i Taniah ka nentiny nitsoaka.
Afak’omaly anefa vao fantatra ny toerana nitondrany azy izay tany Antanifotsy, tany amin’ny fianakaviana tany an-tany lavitra.
Tao anatin’ny fanadihadiana ilay vehivavy dia nilaza izy fa nentiny hanaovana valifaty ilay lehilahy niaraka taminy ilay izy izay nampijaly azy fony izy ireo mbola niaraka. Nidaroka sy nampijaly ilay lehilahy araka ny filazan’ilay vehivavy ka niafara tamin’ny nahafaka ny zaza tao ankibony.
Entiny hampijaliana ilay lehilahy sy ahafatsapana ny fahaverezan’ny zanaka no antony nanaovany izao. Nahafantatra anefa ny rain’ilay ankizivavy fa any amin’ilay ramatoa ny zanany, ka nandefa hafatra tamin’ny finday izy tamin’ilay renin’ilay zaza milaza hoe: “Aza mitory fa isika mivavaka.”
« Déclaration » ihany no nataon’ilay reniny fa ny dadatoan’ilay zaza no nahita fihetsika somary tsy amin’ny tokony ho izy amin’ilay trangan-javatra ka nametraka fitoriana teny amin’ny mpitandro filaminana ary niafara tamin’ny fahitana ilay zaza omaly izay nalaina tany Antanifotsy. Hatolotra eny amin’ny fampanoavana ny raharaha. Nilaza kosa ilay zaza fa tsy nisy fampijaliana nihatra taminy.